ZVAKAWANDA HUGE ... Zvakavanzika Zvakaziviswa Izvozvi! | Martech Zone
China, April 23, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwete, saiti yangu haina kurwiswa neye spammer. Ichi chichiri Doug achinyora ichi chinyorwa uye ndiri kuzviita pasi pesarudzo yangu yekuzvisarudzira.
Wati wamborova peji rewebhu rinoshambadza kuti ivo vachaburitsa zvese zvakavanzika zvematambudziko iwe auri kutsvaga kugadzirisa? Iyo peji rinotanga nemamwe asinganzwisisike akanyorwa, mafomura zvinyorwa izvo zvinokuyamwa iwe mukati, zvakashinga mifananidzo, zvinomanikidza zvipupuriro ... kukudhonzera iwe pasi iro peji kusvikira iwe wave mashiripiti kusimudza kiredhiti kadhi rako muhomwe.
Pandaishanda mubhizinesi retsamba rakananga, ndakatarisa hunyanzvi hwaPat Coyle kopi refu tsamba dzakawana zvisingaite mhinduro mitengo. Ndinotenda shamwari uye munyori Erik Deckers fan uye munyori wekopi refu zvakare. Zvisinei nezvechigadzirwa chaicho, tarenda revanyori ava rinoshamisa… unenge wakabatiswa pfungwa panopera tsamba.
Kune vamwe vatengesi, rudzi urwu rwemakopi kunyora runosemesa uye, dzimwe nguva, vanozvitenda kuti zvinonyengera. Handikwanise kutaura kuti ndinobvuma. Ini ndinogona kuzviona zviri nyore pandinozviona, asi dzimwe nguva zvakaoma kutendeuka. Ini ndatora (uye ndikabhadhara) kwemaviri ebook munguva yangu - uye ndinotenda ndawana mari yangu inokosha.
Vazhinji vevanhu ava vari ruzivo vatengesi, mavhiri uye kubata muma ebook, webinars nemisangano. Ivo vanovhura pamwe neimwe yemahara kuravira iyo inokupinza iwe mukati uye inogona kukubhadharira iwe makumi ezviuru zvemadhora panguva yawakasiya musangano wavo.
Mutengo une hukama, kunyangwe… kana iwe uine tarenda rekusimudzira revanhu ava uye uchida kuisa zvese zvaunazvo mariri… unogona kuita mari yakawanda. Sezvo ini ndichiona kuverengerwa kweblog rangu nemasaiti, ndinogona kunge ndichipa mari yakawanda nekusatevedzera tsoka dzaJoel uye nekuva mushambadzi wezveruzivo pachangu.
Vanhu vazhinji vanobatana kuve Internet Millionaire ne dot-com craze yekupera kwema1990… Asi boka diki reInternet Kushambadzira Mapiyona aiita chinyararire kuita hupfumi hwavo online chero munhu Yahoo'd kana Googled izwi rekuti "kuita mari online". Vazhinji vavo vakavaka umambo hwavo vakakomberedza mazwi mana akareruka asi akasimba zvakanyanya… Dzvanya HERE kuti Uronge
Joel Comm's New York Times Mutengesi Akanyanya, Dzvanya HERE kuti Urayire, haisi chinyorwa chekushambadzira kana bhuku rekuti ungave sei mamioneya. Pane kudaro, iko kutaridzika kunonakidza kune yekutanga nhoroondo yeInternet uye vanhu vakatanga kubatsirwa ipapo - vamwe vacho iwe usati wambonzwa nezvazvo. Sezvo Maka Joyner inoti, "Heino boka diki revanhu avo, pakutanga kweshanduko yehunyanzvi, vakaona mukana vakaubata."
Kune Internet Vashambadzi neInternet Vashambadzi. Ndinoziva zvinonzwika zvakafanana, asi kazhinji rimwe boka rinotarisa kune rimwe kunge mwana wepachikoro wepachikoro anopopota kune mumwe munhu anobva kuruzhinji chikoro. Mune ino kesi, zvakadaro, zvinowanzove zveruzhinji chikoro mwana anokunda… kufambisa hombe purofiti munzira dzisiri dzechivanhu. Zvinenge zvinoita sekunge hazvisi kumusoro uye kumusoro… asi kubatanidzwa ndekwekuzvidira uye iri indasitiri hombe.
Ini handitarise pasi paInternet Marketers iyi zvachose. Ngatitarisei nhoroondo uye, semuenzaniso, enzanisa Corey Rudl (RIP) kusvika Pets.com, zviri pachena kuti ndiani aive nesimba rekugara uye netarenda. Zvakajeka zvakare kuti ndiani akatambisa mari yavo uye akaparadza mari yavo. Ndiri kutya zvikuru neaya matarenda evanamuzvinabhizimusi pakukura mabhizimusi asinganzwisisike, kutenderera nzira kune mumwe nemumwe (pane kukwikwidza), kurairana nekudzidzisana pane izvo zvinoshanda uye zvisina chazvinoshandiswa kushandisa chishandiso chose chavanacho kuyedza uye kugadzira kopi izvo zvinoshanduka.
Ini handisi wekushambadzira uyo anoseka kune vezvemabhizimusi, ndinofunga kusimba kwavo uye nyaya zvinonakidza. Bhuku raJoel inyaya ichiteedzana nenyaya yevamwe vakabudirira kwazvo vevashambadzi veinternet. Nyaya dzevakomana kurara husiku hwese kugona kugona kwavo, kurara pabasa, kudzingwa basa uyezve kuva mamirionea kukurudzira kukuru kune chero muzvinabhizimusi. Kuverenga iyo nyaya kunowedzera kupomba kweropa rako! Ivhareji CMO kana Director weKushambadzira vanogona kudzidza zvakawanda kubva kuboka iri.
NeChipiri manheru ndakapedza Super Crunchers mundege kuenda kuSan Francisco uye ini ndapedza Dzvanya HERE kuti Urayire mangwanani ano pakudzoka - mapeji 279 ese. Iko kuverenga kukuru - ita chokwadi chekutora iwe kana iwe wawana mukana.
Ini ndinotonzwa ebook mune rangu ramangwana riri pedyo!
Tags: ongororo yebhukutora pano kuti uitejoel comm
Apr 24, 2009 pa 10: 33 AM
Yakanaka post, Doug! Ini ndinogona kutaura kuti mabhuku iwayo "akakusundira iwe." Uye chinhu ndechekuti, Ndinoziva CHETE mhando yekopi iwe yauri kureva. Ini ndaive ndakadzidza-mukati mairi ndichikura kune yakashambadza yekushambadzira agency uko kwandaive nemastock murwi wemasampuli ekufamba nawo, kuti ndiwane kufemerwa KWANGU kweangu anotevera akananga tsamba package, pamwe nerimwe rakakura bhuku dema neumwe murume akura. uyo aifanirwa kunge ari guru guru panyaya yekushambadzira yakananga. (Ini ndaive mudiki panguva iyoyo, ndichingodzidza nezve ngano dzeDM dzavakagadzira zvinhu zvakaita saJohnson Mabhokisi uye snap-paks.) Zvisinei, ndakapihwa mukana wekunyora tsamba-yemapeji matanhatu inotengesa kunyoreswa kune Consumer Reports (yaive "tsamba refu" pfungwa). Kunyora kwandakaita, asi mutengi haana kumbozvitumira. Ini ndanga ndichiri kudzidza hunyanzvi hwangu ipapo, uye zvirokwazvo yaive dambudziko.
Ndinoyeuka pandakatanga kuverenga tsamba dzakananga dzekupindura, ndisina kumbobvira ndagamuchira yakawanda yacho pachangu panguva yechikoro chesekondari uye makoreji (ini ndaive munyori anofarira kunyora vanyoreri mhiri kwemakungwa, shamwari uye hama), ndaifunga kuti tsamba idzi dzinonzwika sevhangeri.
Ehe, ebook rinonzwika rakanaka! Zvitore!
Apr 24, 2009 pa 8: 28 PM